မိန်းမက ယောကျာ်းဖြစ်သူ ကိုသတ်တယ်ဆိုတဲ့ မှုခင်းသတင်းတွေဖတ်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူကို ကြောက်ကြောက် နဲ့ ဘက်ထားတဲ့ငွေတွေ ပြန်ပေးနေတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး… – Cele Snap
မိန်းမက ယောကျာ်းဖြစ်သူ ကိုသတ်တယ်ဆိုတဲ့ မှုခင်းသတင်းတွေဖတ်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူကို ကြောက်ကြောက် နဲ့ ဘက်ထားတဲ့ငွေတွေ ပြန်ပေးနေတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး…
ပရိသတ်ကြီးရေ…. ကိုပေါက်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အကောင်းဆုံးလျှောက်လှမ်းလာခဲ့ပြီး ကြိုးစားအားထုတ် မှုတွေကြောင့်လည်း အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ ရပ်တည်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေါက် ဟာဆိုရင် အမြဲလိုလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေတတ်သလို စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝပြီး သူတစ်ပါးပေါ်မှာလည်း အမြဲကူညီတတ်တဲ့ သူဖြစ်တာကြောင့် ချစ်ခင်သူတွေ ပေါများနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ…. ကိုပေါကျကတော့ အနုပညာလောကမှာ အကောငျးဆုံးလြှောကျလှမျးလာခဲ့ပွီး ကွိုးစားအားထုတျ မှုတှကွေောငျ့လညျး အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိနတောဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ သူ့ရဲ့ကွိုးစားမှုတှကွေောငျ့ ရုပျရှငျဒါရိုကျတာအနနေဲ့ အနုပညာနယျပယျမှာ ရပျတညျခဲ့ပွီလညျးဖွဈပါတယျ။ ကိုပေါကျ ဟာဆိုရငျ အမွဲလိုလို ပြျောပြျောရှငျရှငျ နတေတျသလို စိတျသဘောထား ပွညျ့ဝပွီး သူတဈပါးပျေါမှာလညျး အမွဲကူညီတတျတဲ့ သူဖွဈတာကွောငျ့ ခဈြခငျသူတှေ ပေါမြားနတောပဲ ဖွဈပါတယျနျော။
လူရွှင်တော်အသင်းသားတွေကိုယ်တိုင် လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ဦးဧရာရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးမြင်ကွင်လေးတစ်ခု…
ဦးဗေလုဝ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းတုရဲ့ အဓိကတရားခံကို ပြောပြလိုက်တဲ့ လူရွှင်တော် ငှက်ပျောကြော်..